Malunga - Jeasnn
Ikhaya » Ngathi
I-Jiesheng Hardware ngumenzi wobuchwephesha bokuchaneka ngokuchanekileyo kwezahlulo ze-CNC, iindawo ezijika i-CNC, i-shafts, izikrufu zesiko kunye namandongomane.
Efektri yethu ibekwe kwindawo yokuvelisa yaseTshayina-Dongguan. Ukususela ngo-2008, siye egxile kuyilo, imveliso kunye nokuthengiswa iindawo ngqo metal ukubonelela ngenkonzo enye-stop kubaxumi bethu. Sinokubonelela abathengi ngoyilo olugqibeleleyo lwemveliso kunye nokuphuhlisa izicwangciso ezifanelekileyo nezikumgangatho ophezulu ngobuchwephesha bobuchwephesha.
Okwangoku, ngokuyintloko siyila, siphuhlise kwaye sivelise ngokuchanekileyo izixhobo zentsimbi izixhobo zokhuselo, ukukhanya okrelekrele, izixhobo zoomatshini, izixhobo zombane kunye namanye amashishini.
Jiesheng iye ngokungqongqo ukuthobela ISO9001: 2015 inkqubo yolawulo lomgangatho. Siye sazisa ngaphezu kwe-100 iiseti zoomatshini abaphambili, njenge (Citizen) oomatshini bokugaya i-CNC, amaziko emishini ye-CNC, oomatshini be-CNC lathe, oomatshini bokuchwetheza ngokuzenzekelayo kunye noomatshini bokujija. Ukunyamezeleka kweemveliso kungafikelela +/- 0.001mm. SineJapan Mitutoyo yokulungelelanisa umatshini wokulinganisa, iprojektha ye-2.5, umatshini wokuhlola i-laser, imicroscope, umatshini wobulukhuni, umatshini we-torque, imitha ye-roughness, i-altimeter kunye nezinye izixhobo zokuvavanya ngokuthe ngqo kwamanye amazwe.
Ukuhlolwa kweenkcukacha kwibhetshi nganye yempahla ekrwada. Yonke inkqubo yokuvelisa yenziwa ngokungqongqo. Iisampulu zinokulungiswa ngokukhawuleza kwimizuzu engama-30.
Ngaphezulu kwe-80% yabathengi bethu abavela eMntla Melika naseYurophu. Sikhonza abathengi bethu ngenyameko, banconywa ngokubanzi ngabathengi bethu. Njengomgaqo wethu wenkonzo uthe senza le nto besiyithethile, sikhonze ngenyameko. Sijonge ukuba liqabane lakho lexesha elide.